रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - डाटाबेस ट्याब
तपाईँंले एउटा कागजात भित्र थुप्रै रेकर्डहरू घुसाउनलाई यो फाँट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। निश्चित रेकर्ड प्रयोग गर्ने फारम पत्र फाँटहरूको अगाडि कुनै रेकर्ड फाँट घुसाउनुहोस्।
डाटाबेस छनोट बाकसमा चयन गरिएको डाटाबेस तालिकाको नाम घुसाउछ। "डाटाबेस नाम" फाँट एउटा विश्वव्यापी फाँट हो,जुन,यदि तपाईँंले तपाईँंको कागजात भित्र एउटा फरक डाटाबेस नाम घुसाउनुभएमा,पहिले ने घुसाईएका "डाटाबेस नाम" फाँटहरूको सामग्रीहरू अद्यावधिक हुन्छन।
चिठ्ठी मर्ज फाँट
एउटा डाटाबेस फाँटको नाम एउटा प्लेसहोल्डरको रूपमा घुसाउछ ,ताकी तपाईँंले मेल मर्ज कागजात सिर्जना गर्न सक्नुहोस्। तपाईँंले फारम पत्र मुद्रण गरेको वेलामा फाँट सामग्री स्वत: तरीकाले घुस्दछ।
यदि तपाईँंले परिभाषित गरेको शर्त मिलेमा, तपाईँंको कागजात भित्र अर्को मेल मर्ज फाँटको सामग्रीहरू घुसाउछ। तपाईँंले सम्मिलित गर्न खोजेका रेकर्डहरू डेटा स्रोत दृश्यमा चयन गर्ने पर्दछ।
एउटा कागजात भित्र क्रमागत रेकर्डहरूको सामग्रीहरू मेल मर्ज फाँटहरू बिचमा घुसाउनलाई तपाईँंले "अर्को रेकर्ड" फाँट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
चयन गरिएको डाटाबेस रेकर्डको सङ्ख्या प्रविष्ट गराउनुहोस्.
तपाईँंले फाँटई सन्दर्भ गर्लाइन चाहेक डाटाबेस तालिका वा डाटाबेस क्वेरी चयन गर्नुहोस्। तपाईँंले कागजात भित्र एक भन्दा बढी डाटाबेस वा क्वेरी बाट फाँटहरू सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ।ो
यदि तपाईँं चाहनुहुन्छ भने, "कुनै रेकर्ड" र "अर्को रेकर्ड" फाँटहरू घुसाईनुभन्दा पहिले मिल्नै पर्ने एउटा शर्त मानाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँंले शर्त पाठ परिवर्तन गर्नुहुन्न भने,पूर्वनिर्धारित शर्त चाही "ट्रु" हो।
तपाईँंले निर्दिष्ट गर्नुभएको शर्त मिल पछि तपाईँंले घुसाउन चाहेको रेकर्डको सङ्ख्या प्रविष्टी गर्नुहोस्। डेटा स्रोत दृश्यमा हालको छनोट सँग रेकर्ड सङ्ख्या अनुरूप हुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईँंले १० रेकर्डहरू सम्मिलित ५ रेकर्ड चयन गर्नुभएमा, पहिलो रेकर्डको सङ्ख्या १ हुनेछ र ६ हुने छैन।
यदि तपाईँंले बिभिन्न डाटाबेस(वा एउटा उही डाटाबेसमा फरक तालिका वा क्वेरी भित्र)मा फाँटहरूलाई सन्दर्भ गर्नुभएमा,LibreOffice ले हालको छनोट सँग सम्बन्धित रेकर्ड नम्वर निर्धारण गर्दछ।
चयन डाटाबेसमा ढाँचा परिभाषित प्रयोग गर्दछ.
एउटा फाइल खोल्दछ जहाव तपाईँंले एउटा डाटाबेस फाइल (*.odb) चयन गर्न सक्नुहुन्छ।चयन गरिएको फाइल डाटाबेसहरू छनोट सूचीमा थप गरिन्छ।
तपाईँंलेप्रयोगकर्ता-परिभाषित ढाँचाहरूको सूची भित्र ढाँचा लागू गर्दछ।
प्रयोगकर्ता-परिभाषित ढाँचाहरूको सूची
फारम चिठ्ठी टङ्कण गर्दा
जब तपाईँंले डाटाबेस फाँटहरू समाविष्ट एउटा कागजात मुद्रण गर्नुहुन्छ,एउटा संवादले तपाईँंलाई एउटा फारम पत्र मुद्रण गर्न भन्दछ। यदि तपाईँंले हो भन्ने उत्तर दिनुहुन्छ भने,मेल मर्ज संवाद खुल्दछ जहाँ तपाईँंले मुद्रण गर्नलाई डाटाबेस रेकर्डहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ।